पुलिसले गुप्तांगमा पेट्रोल खन्याएर करेन्ट लगाइदिँदा आगो सल्किएपछि. – Khabar Art Nepal
पुलिसले गुप्तांगमा पेट्रोल खन्याएर करेन्ट लगाइदिँदा आगो सल्किएपछि.
By Pasang Tamang	 On २० चैत्र २०७५, बुधबार ०९:३०
कानपुर। भारतको उत्तर प्रदेशमा पुलिसले दुई युवकलाई अत्यन्तै कठोर यातना दिएको घटना सार्वजनिनक भएपछि बबाल भएको छ । यहाँको बिठूर नामको थानाको पुलिसमाथि दुई युवकलाई निर्मम यातना दिएको आरोप लागेको छ । आरोप लागेपछि थाना प्रमुखलाई बर्खास्त गरी कारवाही अगाडि बढाइएको भारतीय दैनिक पत्रिका ‘भास्कर’ले आफ्नो अनलाइनमा लेखेको छ ।
समाचारअनुसार पुलिसले सोनु निषाद र मोनु निषाद नामका दुई युवकलाई एक हत्याको घटनाको अनुसन्धान गर्ने क्रममा शंकाको आधारमा हिरासतमा लिएको थियो । हिरासतमा लिएपछि उनीहरुलाई निकै निर्मम तरिकाले कुटपिट गरिएको आरोप लगाइएको छ । पुलिसले यातना दिने क्रममा उनीहरुलाई पटक–पटक गोली हानेर मारिदिने धम्की दिएको उनीहरुले बताएका छन् ।
मोनु निषादले मिडियाको अगाडि पुलिसले आफ्नो गुप्तांगमा पेट्रोल खन्याएर आगो लगाइदिएको आरोप लगाएका छन् । करेन्ट लगाउँदा स्पार्किङ भएपछि आगो लागेर आफ्नो शरीरको धेरै भाग जलेको उनले बताए । घटनापछि आत्तिउको पुलिसले उनलाई तत्काल अस्पताल भर्ना गरेको छ । पुलिसले भने अर्कै दावी गरेको छ । एसएसपी अनन्त कुमारले भने मोनुको खल्तीमा पहिल्यै सलाइ भएको र सोधपुछमा आत्तिएर उनले आफैं आगो लगाएको बताएका छन् ।
नेपाल प्रहरीले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहका ५४० नेता तथा कार्यकर्तालाई पक्राउ